Famokaran-drano ao Mandroseza | JIRAMA
Famokaran-drano ao Mandroseza
Nitsidika ny fotodrafitrasa famokaran-drano ao Mandroseza ny Minisitry ny Rano, ny Fidiovana ary ny Fanadiovana Voahary Rakotovelomanantsoa sy ny Tale Jeneralin’ny JIRAMA Vonjy Andriamanga, androany, 03 febroary, folakandro.
Hita taratra ny fandrosoan’ny asa fanitarana ny tobim-pamokaran-dranon’i Mandroseza izay nanomboka ny volana desambra 2019.
Hita taratra nandritra izany ny fandrosoan’ny asa fanitarana ny tobim-pamokaran-dranon’i Mandroseza izay nanomboka ny volana desambra 2019. Raha ny fanazavana dia ato anatin’ny enim-bolana voalohany no ho vita ity tobim-pamokaran-drano fanampiny 40 000m3 ity. Manodidina ny 200 000m3 isan’andro ny rano vokarin’i Mandroseza raha toa ka mananika ny 300 000m3 kosa ny filan’ny mponina.
Nilaza ny Tale Jeneralin’ny JIRAMA Vonjy Andriamanga fa maro ireo tetikasa hiarahan’ny roa tonta manatanteraka hamahana ny olan’ny famatsian-drano eto Antananarivo sy ny manodidina. Isan’izany ny fanorenana tobim-pamokaran-drano telo vaovao, fanavaozana ireo fantson-drano izay efa manomboka ny ampahany miaraka amin’ny kaompania TRG avy atsy Afrika Atsimo, fanatsarana kalitaon’ny rano ary fanomezana paompin-drano ho an’ny daholobe.